Waterborne Diseases ရေကတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါများ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Waterborne Diseases ရေကတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါများ
မြစ်ရေတွေကြီးနေလို့ ဒီစာကိုမွမ်းမံပြီး ပြန်တင်ပါတယ်။ ရေကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေဟာ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖြစ်စေတယ်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မြစ်ရေကြီးခြင်းနဲ့ မိုးခေါင်ခြင်းကဆက်ပြီး သောက်ရေ သုံးရေမသန့်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ရေထဲကို အညစ်အကြေးတွေ ကူးစက်မယ်။ ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ကြောင့် ကမ္ဘာမှာနှစ်စဉ် လူ ၂ သန်းသေဆုံးနေရတယ်။ အသက် ၅ နှစ်အောက် အများဆုံး။
ရောဂါရစေတဲ့ပိုးမွှား၊ အဆိပ်အတောက်၊ လူနဲ့မသင့်တဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေကို သောက်သုံးမိရင် ကူးစက်ရောဂါတွေရနိုင်တယ်။ ကူးစက်ရောဂါများထိန်းချုပ်ရေးဌာနရဲ့ ၁၉၇၂-၂ဝဝဝ စာရင်းအရ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့နိုင်တယ်။
1. Giardia lamblia 35.8% ဝမ်းပျက်ရောဂါ၊
2. Shigella spp. 11.4% ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊
3. Hepatitis A 6.3% အသည်းရောင် အေ ရောဂါ၊
4. Noroviruses 5.7% ဝမ်းလျှောရောဂါ၊
5. Campylobacter jejuni 4.5% အစာလမ်းရောဂါ၊
6. Cryptosporidium 4.2% အစာလမ်းရောဂါ၊
7. Samonella, nontyphoidal 3.9% အစာလမ်းရောဂါ၊
8. Escherichia coli O157-H7 2.4% အစာလမ်းရောဂါ၊
9. Salmonella Typhi 1.3% တိုက်ဖွိုက်ရောဂါ၊
10. Vibrio cholera 0.6% ကလာဝမ်းရောဂါ၊
11. Enterotoxigenic Escherichia coli 0.3% အစာလမ်းရောဂါ၊
12. Yersinia enterocolitica 0.3% အစာလမ်းရောဂါ၊
13. Rotavirus 0.3% ဝမ်းလျှောရောဂါ၊
14. Entamoeba histolytica 0.3% အမီးဘားဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊
15. Plesiomonas shigelloides 0.3% အစာလမ်းရောဂါ၊
16. Small round virus 0.3% အစာလမ်းရောဂါ၊
17. Miscellaneous chemicals 0.3% ဓါတုပစ္စည်းများ။
ရေကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေဟာ ဗက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဆစ်စ်တွေကနေဖြစ်စေတယ်။
1. Travelers' Diarrhea ခရီးသွားဝမ်းပျက်ရောဂါ၊
2. Giardia and Cryptosporidium ဂိုင်ယာဒီးယားနှင့် ခရစ်ပတို စပိုဒီယမ်ရောဂါ၊
3. Dysentery ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊
4. Salmonella ဆာလ်မိုနဲ့လားရောဂါ၊
5. E. coli အီးကိုလိုင်ရောဂါ၊
6. Typhoid Fever တိုက်ဖွိုက်ရောဂါ၊
7. Cholera ကာလဝမ်းရောဂါ၊
8. Hepatitis A အသည်းရောင်အေရောဂါ၊
9. Hepatitis E အသည်းရောင်အီးရောဂါ၊
10. Campylobacter ကမ်ဖိုင်လိုဘက်တာရောဂါ။
ရေ ၁ ဂါလံထဲကို Chlorine bleach (sodium hypochlorite) အလွယ်ဝယ်ရ အိမ်သုံး ဘလိခ်ျ ခေါ် ချွတ်ဆေး ၁ဝ စက် ထည့်ပြီး မိနစ် ၃ဝ ကြာစောင့်ပါ။ ကလိုရင်းအနံ့မရသေးရင် အဲဒီအတိုင်း နောက်တကြိမ် ထပ်လုပ်ပါ။ သန့်ထားပြီးရေက ကလိုရင်းနံ့ ပျောက်လိုရင် ရေကို ပွက်အောင်အပူပေးပါ။
Chlorine ကလိုရင်းဆိုတာ sodium hypochlorite solution (NaOCl) နဲ့ solid calcium hypochlorite (Ca(OCl)2 တမျိုးမျိုးကို သုံးနိုင်တယ်။ ရေ ၁ လီတာထဲကို ကလိုရင်း (5.25% chlorine) ၂ စက် (0.1 mL) ထည့်ပြီးသမအောင်ရောပါ။ ဖုံးထားပါ။ နာရီဝက် စောင့်ရင် သောက်လို့ရပြီ။ အများဆုံး ၈ စက်ပါတဲ့ရေအထိသုံးနိုင်တယ်။
၂။ Aquatabs ရေသန့်ဆေးပြားနည်း
ဆေး ၁ ပြားကနေ ရေအကြည် ဂါလံဝက်၊ ရေအနောက် ၁/၅ ဂါလံကို သန့်ပေးနိုင်တယ်။ ရေနောက်နေရင် အရင်စစ်ပေးပါ။ အနယ်ထိုင်စေပါ။ အဲဒီရေအတွက် ဆေး ၁ ပြား 0.8 quarts လို့လဲ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒီဆေးပြားဟာ ရိုးရိုးရေရော သူများတွေက သန့်အောင်လုပ်ထားတာကို သေချာစေဘို့ အတွက်ပါ လူသောက်ရေအဖြစ်သုံးနိုင်တယ်။ မြစ်ရေ၊ ချောင်းရေ၊ ကန်ရေ၊ ကျုံးရေ၊ တွင်းရေ၊ လှောင်ရေ အားလုံးအတွက် ဖြစ်တယ်။ ရေအပူချိန် 4°C အထိရတယ်။ မသန့်ဘူးထင်တဲ့ရေကို သန့်တဲ့ထည့်စရာထဲထည့်ပါ။ Aquatabs ဆေး ၁ ပြားကို ရေ 1/5 gallon (0.75 litres) ထဲ ထည့်ပါ။ ၁ဝ မိနစ်ကြာရောမွှေပေးပါ။ ၃ဝ မိနစ်စောင့်ပါ။ 6.5 ppm (6.5 mg/L) chlorine solution ရလာမယ်။ အခန်းတွင်းအပူချိန်ရှိတဲ့ရေ ၂ ကွာတ ကို Aquatabs ၁ ပြားထည့်ပါ။ 2.6ppm (2.6mg/L) chlorine solution ရလာအောင် ၁ဝ မိနစ်ကြာရောမွှေပါ။ ၃ဝ မိနစ်စောင့်ပါ။